Umaki: isinqumo sokuthengwa kwabathengi
Umthelela Womkhiqizo Esinqumweni Sokuthengwa Komthengi
NgeSonto, Septhemba 27, 2015 NgoLwesine, Novemba 5, 2015 Douglas Karr
Besilokhu sibhala futhi sikhuluma kakhulu mayelana nokunikezwa kanye nesinqumo sokuthenga njengoba kuhlobene nokukhiqizwa kokuqukethwe. Ukuqashelwa komkhiqizo kudlala indima enkulu; mhlawumbe ngaphezu kokucabanga kwakho! Njengoba uqhubeka nokwakha ulwazi lomkhiqizo wakho kuwebhu, khumbula ukuthi - ngenkathi okuqukethwe kungahle kungaholi ngokushesha ekuguqulweni - kungaholela ekubonakaleni komkhiqizo. Njengoba ubukhona bakho bukhula futhi nomkhiqizo wakho uba insiza ethembekile,